January 5, 2021 - Online Hartha
ဆံပငျကြှတျခွငျးကို ကာကှယျပေးပွီး ဆံကသောကို သနျစှမျးစဖေို့ ကွကျဥကို ဒီလိုသုံးပါ
January 5, 2021 by Online Hartha
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံကေသာကို သန်စွမ်းစေဖို့ ကြက်ဥကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆံပင်အုံထူပြီး ရှည်လျားတဲ့ ဆံကေသာကို လူတိုင်းလိုချင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတို့အတွက်တော့ ဆံကေသာဆိုတာ ဒုတိယမျက်နှာ ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင့်အပါအဝင် ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နေထိုင်ပြုမူမှုတွေကြောင့် ဆံပင်ကျွတ် တတ်ကြပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာသက်သာစေပြီး ဆံကေသာကို သဘာဝအတိုင်း သန်စွမ်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ကြက်ဥ ၂ လုံး ကြက်ဆူဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ခွက်တစ်လုံးထဲမှာ ကြက်ဥနှစ်လုံးကိုခွဲပြီးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်သေချာခလောက်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် ကြက်ဆူဆီထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်သေချာမွှေပေးလိုက်ပါ။ အသုံးပြုနည်း ဦးရေပြားအပါအဝင် ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားထိ သေချာလိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် ၂၅ မိနစ် ၊ မိနစ် ၃၀ လောက်ထားပြီး ခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ။ … Read more
အအေးဗူးတှေ ဘီယာဗူး တှဖေောကျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြကိုမဖွဈမနသေတိထားပါ
အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ။ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီး သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား? မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ … Read more
မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေလား?
မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရင်း ငွေတွေ အများအပြား အသုံးပြုကြပေမယ့် လည်ပင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးဖို့ မေ့တတ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း ၁ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး လည်ပင်ပေါ်မှာ ပွတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ အသားအရေ ဖြူဝင်းစိုပြေလာမှာပါ။ နည်း ၂ ပါဝင်ပစ္စည်း စန္ဒကူး နံ့သာမှုန့် (သို့) ရွှံ့စေးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း … Read more
အိမျရှငျမမြား သိထားသငျ့တဲ့ အန်တရာယျရှိသော ကွကျသှနျနီခွမျး
( နေ့တိုင်းဟင်းချက်ရင်အသုံးပြုတာမို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်နော်) ထက်ခြမ်းခွဲထားသော ကြက်သွန်နီ ကို ချက်ချင်းအသုံးမပြုနိုင်ပဲ ရက်ကျော်လွန်သွားလျှင်ပြန်၍အသုံးမပြုသင့်ပါ။ မစားသင့်ပါ။ အန္တရာယ် ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ခွဲခြမ်းထားပြီး အပြင်မှာ အနည်းဆုံး ၆ နာရီနှင့် အထက်ကြာသွားသည့် ၎င်းကြက်သွန်နီခြမ်းဟာ အပုတ်နံ့များ၊ အနဲ့ဆိုးများကို စုပ်ထားထားနိုင်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့် အခြား အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ပိုးမွှားများလည်း ပါရှိလာသည့်အတွက် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော၊ ပိုက်အောင့်၊ ပိုက်နာဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးစာမျက်နှာများမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ အခွံခွာထားသည့် ကြက်သွန်နီနှင့် ထက်ခြမ်းခွဲထားသည့် ကြက်သွန်နီခြမ်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက အဖုံးလုံအောင် ပိတ်ထားသောဗူး၊ခွက်တို့ဖြင့်လုံခြုံစွာထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ မသိမ်းဆည်းလိုက်ရပဲ အပြင်မှာ အချိန်ကြာအောင် ပစ်ထားမိသည့် ကြက်သွန်နီခြမ်းကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရတော့မည်ဆိုလျှင်လည်း ပုံထဲမှာ မြင်ရသည့်အတိုင်း … Read more
ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြားတှရှေိ့
တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ကျွဲခရန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိကမာချောင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောခလေးငယ်တစ်ဦးမှာ အိပ်မက်ရလို့တောထဲကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာတွင် ရှေးခေတ်ကလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဘုရားများပေါ်ထွက်နေရာ တွေ့ရသည့် ခလေးငယ်ဟာ မြင်တွေ့ရသောဘုရား (၂)ဆူကိုအိမ်သို့အရင်ပင့်ဆောင်ပြီးနောက်ကျန် (၁၂) ဆူကိုပြန်လည်သွားရောက်ပင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါမှာ ပင့်ဆောင်လာသောဘုရားများကိုခလေးငယ်၏နေအိမ်တွင်ထားရှိခဲပါသည်။ခလေးငယ်ဟာ နောက်ဘုရားများကိုလဲပြန်လည်တူးဖော်ပေးဦးမည်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘုရားဖူများလဲသွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးနိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ…အခုလိုအချိန်ပေးပြီးအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Unicode Version တနသာင်ျရီတိုငျး မွိတျခရိုငျ ကြှနျးစုမွို့နယျ ကြှဲခရနျကြေးရှာအုပျစုရှိကမာခြောငျးကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသောခလေးငယျတဈဦးမှာ အိပျမကျရလို့တောထဲကိုသှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါနရောတှငျ ရှေးခတျေကလို့ဆိုနိုငျတဲ့ဘုရားမြားပျေါထှကျနရော တှရေ့သညျ့ ခလေးငယျဟာ မွငျတှရေ့သောဘုရား (၂)ဆူကိုအိမျသို့အရငျပငျ့ဆောငျပွီးနောကျကနျြ (၁၂) ဆူကိုပွနျလညျသှားရောကျပငျ့ဆောငျခဲ့သညျ။ ယခုအခါမှာ ပငျ့ဆောငျလာသောဘုရားမြားကိုခလေးငယျ၏နအေိမျတှငျထားရှိခဲပါသညျ။ခလေးငယျဟာ နောကျဘုရားမြားကိုလဲပွနျလညျတူးဖျောပေးဦးမညျလို့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ဘုရားဖူမြားလဲသှားရောကျဖူးမြှျောနိုငျပါကွောငျး အသိပေးနိုးဆျောအပျပါသညျ။ ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ…အခုလိုအခြိနျပေးပွီးအဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသော နလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကျွန်တော်တို့က Laptop External Battery (အလွယ်တကူ ဖြုတ်လို့ရသော battery) အားမခံတော့လို့ အသစ်လဲတော့မယ်ဆိုရင်… OEM Battery နဲ့ Original နှစ်မျိုးရှိတယ် OEM က ဈေးသက်သာပြီး Original က ဈေးနည်းနည်းပိုမယ်။ Battery က4Cells နဲ့6Cells ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ Gaming Laptop တွေမှာ9cells နဲ့ 12 Cell ထိ လာတတ်ပါတယ်။ Battery4Cells က ခန့်မှန်း‌ခြေ နှစ်နာရီ ကနေ နှစ်နာရီလေးဆယ်ငါးမိနစ်လောက် အသုံးခံတယ်။ (အသုံးပြုတဲ့ Software ပေါ်မူတည်ပြီးခန့်မှန်းခြေ) ဈေးက သုံးသောင်းကနေ လေးသောင်းကြားရှိတယ် အကြမ်းဖြင်း … Read more
ဆှမျးခံကွှလာရငျး ဆိုငျကအရုပျလေးတှကေို ငေးကွညျ့နတေဲ့ ကိုရငျလေးကို မေးကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ
ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်ကအရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… ဒီနေ့ ပျော်သည်မိမိဆိုင်ရှေ့မှာချိတ်ထားတဲ့အရုပ်လေးတွေကိုရပ်ကြည့်နေတဲ့ကိုရင်လေးကို … ကိုရင်လေးဘုရားဆွမ်း၊ဆွမ်းဟင်းပြည့်စုံပါလားဘုရား လို့ မေးလိုက်တော့ပြည့်စုံပါတယ် ဒကာမကြီး။ ကိုရင်လေးစာဝါလိုက်နေပါလားဘုရားဆိုတော့၁ တန်းပါ တဲ့ .ကိုရင်ဘုရားအရုပ်လိုချင်လို့လားဘုရားလို့မေးလိုက်တော့ မိမိကို ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းလေးငြိမ့်ပြတယ်။ကိုရင်လေးလိုချင်တဲ့ကားအရုပ်လေးတွေကိုလှူပေးခဲ့တယ်။ မိမိလှူပေးတာတွေ့တော့ဘေးကလူတစ်ချို့ကကိုရင်ဆိုတာစာသင်ရမှာလေ ကစားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ . အလွန်ဆုံးရှိ၆ – ၇ နှစ် အရွယ်မိဘ နဲ့ ဝေးပြီးခုလို အလွန်အေးတဲ့မန္တလေး ဆောင်းနံနက်ခင်း၆ – ၇ နာရီ မိမိတို့ အများစုကုတင်ပေါ် စောင်ခြုံလို့ကွေးကောင်းတုန်း အချိန်အနွေးထည်ဦးထုပ်မပါခြေဗလာ နှင့်ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဘုရားသားတော်ကိုရင်လေးနေရာဝင်ကြည့်ပါ။ ကလေးဘဝအရွယ်မှာသူလည်းအဖေ့အိမ်မှာ ပျော်ချင်မှာပဲအမေ့ရင်ခွင်မှာ နွေးထွေးမှုတွေလိုချင်မိမှာပဲလေ … မောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးဆော့ကစားချင်မိမှာပေါ့ …ကိုရင်လေးကိုအရုပ်ပေးလှူခဲ့တာအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့လား? သူတို့လေးတွေစာဝါလိုက်ချိန်လိုက်ကစားချိန်ကစားနားချိန်နားပြီးသာသနာတော်မှာပျော်မှမြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်လား။ ကိုရင်လေးတွေဆိုတာအနာဂါတ်ရဲ့စာချဆရာတော်လောင်းတရားဟောဆရာတော်လောင်းအရိယာလောင်း တွေလို့ ပဲမြင်မိပါတယ် သူတို့လေးတွေသာသနာတော်မှာပျော်ကြပါစေ သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ ကိုရင်လေးကိုနောက်နောင်ဆွမ်းဟင်းမပြည့်စုံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ဆိုင်ကိုကြွခဲ့ပါဘုရားဆိုတော့ ကိုရင်လေး … Read more
ကန်စွန်းဥ ၂၅ ကျပ်သားကို ပြုတ်၍ အခွံများ ခွာပြီး ထောင်းပါ။ ထောပတ် ၁၀ ကျပ်သားကို ကျက်အောင် ချက်၍ ထောင်းပြီးကန်စွန်းဥ ၂၅ ကျပ်သားနှင့် သကြား ၅ ကျပ်သားကို ထည့်မွှေပါ။ ကန်စွန်းယို ဖြစ်လာပါသည်။ ယင်းကန်စွန်းယိုကို ဟင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် စားသွားလျှင် ဓမ္မတာ သွေးလွန်ရောဂါကို ရပ်တန့်စေပါသည်။ ဓမ္မတာလွန်ခြင်း အမျိုးသမီးများမှာ သွေးပေါ်ရက်တွင် ထမီ တစ်ထည်ပြီး တစ်ထည် လဲရလောက်အောင် ရေအိုးကို လှဲသွန်သကဲ့သို့ အမှတ်မထင် သွေးလွန်စွာ ဆင်းလာတတ်သည်။ အနေအထိုင်မဆင်ခြင်ခြင်း ဝမ်ဗိုက်အား တခုခုနှင့် ထိခိုက်မိခြင်း သွေးဆင်းစေသော အစားအစာ ဆေးဝါးတို့ကို လွန်းမင်းစွာ စားမိသောက်မိခြင်း ယခင်းလများမှသွေး မပေါ်ခဲ့ဘဲ သွေးဟောင်းများ … Read more
ရာသီသွေး အရောင်အမျိုးအစားကနေသိနိုင်တဲ့ သတိထားရမည့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အများစုက ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီး တွေအနေနဲ့ ရာသီသွေးအခြေအနေ တစ်ခုခုထူးခြားတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းတာဟာရှက်စရာမဟုတ်သလို ရာသီသွေးအမျိုးအစား အလိုက်သိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါတယ်။ ပန်းရောင်သမ်းနေရင် ရာသီသွေးဟာပုံမှန်ဆင်းနေကျအရောင်ထက် သွေးအရောင်ဖျော့ပြီး ပန်းရောင်ဘက်သမ်းနေတယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမဟော်မုန်းနည်းလွန်းနေ တယ်ဆိုတဲ့ လ က္ခ ဏာပါပဲ။ အဲဒီလို ရာသီသွေးပန်းရောင်သမ်းတာဟာ မကြာခဏဖြစ်တယ်၊ သွေးအရောင်ဟာသိသိသာသာဖျော့လာတယ် ဆိုရင် အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ လာ နိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးကျဲလွန်းရင် သွေးအရောင်ဖျော့လွန်းပြီး ရာသီသွေးဟာခပ်ကျဲကျဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အာဟာရမမျှတဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
အလွန်ထူးဆန်းပြီးမြူးကနေသာမြွေနဂါးအား ပြည်သူအများ ကြည့်ရှုကာ ယုံကြည်စွာ ဆက်သမှုများပြုလုပ်…(ရုပ်သံ) ရန်ပြုခြင်းမရှိပဲ မြူးကနေသော မြွေနဂါးအား ပြည်သူအများ ကြည့်ရှုကာ ယုံကြည်စွာ ဆက်သမှုများပြုလုပ် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို နောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်.. ထိုင်းနိုင်ငံ ဖိစနုလို့ပြည်နယ် တွင် မြွေနဂါးလို့ယုံကြည်ရတဲ့ မြွေစိမ်းက စမ်းချောင်းထဲတွင် လွန့်လူးစွာ ကပြနေတာ ကို ရွာသားတွေလာရောက်ကြည့်ရှူ့ ၊ အချိုရည် ဆက်သကြ ၊ ပူလို့လား.. ? ဘာလားတော့ မသိဘူး.. ၊ တိမွေး / ကုနဲ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ထိမ်းသိမ်းရေးကလာကြည့်ကြမည်.. ဟုသိရ ထိုင်းတွင် ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ရပ်ဆန်း.. အဲ့ဒီမြွေဟာမကြာခဏ စမ်းချောင်းထဲဆင်း လာပြီးကပြလေ့ရှိပြီး မည်သူ့ကို မှ ရန်ပြုခြင်း မရှိပါ…။ Source; SiThu Maung Unicode Version … Read more